Mmetụta Ahịa nke Ndị Nke Mbụ na Nke Data nke Atọ | Martech Zone
N'agbanyeghị data-chụpụrụ marketers 'mere ihe ndabere ịdabere na data nke atọ, ihe omumu ohuru nke Econsultancy na Signal weputara gosiputara ngbanwe na ulo oru. Nnyocha ahụ chọpụtara na 81% nke ndị ahịa na-akọ na ha nwetara ya kasị elu ROI site na usoro data ha mgbe eji data nke mbụ (ma e jiri ya tụnyere 71% nke ndị ọgbọ ha na isi) naanị 61% na-ekwu maka data ndị ọzọ. Mgbanwe a na-atụ anya ka ọ mikwuo emi, yana 82% nke ndị ahịa niile nyochara atụmatụ iji mụbaa ojiji nke data mbụ (0% na-ekwupụta mbelata), ebe 1 na 4 ndị ahịa na-ezube ibelata ojiji nke data ndị ọzọ.
Kedu ihe dị iche na etiti data nke mbụ na nke atọ
Ndi otu gi nakọtara ma nwekwaa ya. Ọ nwere ike ịbụ data dị ka nsonaazụ ndị ahịa na data ịzụta. Otu ọzọ na-anakọta data nke atọ ma zụrụ ya n'ozuzu ya, tinye ya na data ndị ahịa gị ugbu a, ma ọ bụ dị site na ngwa ndị ọzọ. Okwu na-ebilite na izi ezi na oge nke data nke ato.
Ihe data nke abuo bu ihe ozo ma ulo oru anaghi ya. A na-anakọta data nke abụọ site na mmekọrịta ụlọ ọrụ. Site na ịkekọrịta ndị na-ege ntị, ọnụego nzaghachi nwere ike ịdị elu karịa, data ndị ahịa nwere ike ịba ọgaranya karịa, data ahụ ka dịkwa ezi na oge. Ọ bụrụ n'ị na - adọga inweta data ndị ọzọ gbasara ndị ahịa gị, inwere ike lelee ịmekọrịta otu ụlọ ọrụ na - ekenye ndị ahịa gị!
Ruo ọtụtụ afọ, data nke atọ abụrụla isi nke ahịa dijitalụ, mana ụlọ ọrụ kachasị elu nke oge a na-elewanye anya n'ime data nke mbụ ha. Ahụmịhe ndị ahịa ka mma na-achọ data ka mma. Dị ga-aghọta ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị na-ege ntị ụkpụrụ-ọwa mmekọrịta na ọrụ ha ahịa njem-ihe ndị ahịa chọrọ na mgbe ha chọrọ ya. N'ọnọdụ ọ bụla, data nke mbụ sitere n'aka ndị ahịa n'ezie ga-abụ nke kachasị baa uru.
Nsonaazụ nyocha ahụ dabere na ndị ahịa 302 ma duzie ya na Mee 2015 site na Econsultancy na signal.
Key Key Will ga - ahụ na mkpesa a
Kedu uru ndị asọmpi maka ụlọ ọrụ ndị nwere ọgụgụ isi karịa n'iji data ha nwere?
Ebee ka ndị na-eme ihe dị elu na-anakọta data mbụ ha ma olee otu nke ahụ si dị iche na isi?
Kedu ihe ndị mbụ ị ga-eme iji nyere òtù dị iche iche aka iji data nke mbụ ha eme ihe?
Kedu ụdị ụdị data edepụtara ka elu maka izi ezi na ịba uru?
Tags: ahịa dataahịa data roiahịa ọgụgụ isiihe omuma datadata roiihe omumadata mbụdata nke abuomgbaàmàdata nke atọ
Akpaghị aka Ule na njikarịcha nke Mobile App gị na ito